Robert Mugabe oo 95 sano ku geeriyooday+Taariikhdiisa | Xaysimo
Home War Robert Mugabe oo 95 sano ku geeriyooday+Taariikhdiisa
Robert Mugabe oo 95 sano ku geeriyooday+Taariikhdiisa
Robert Mugabe ayaa dhintay isagoo ah 95 sano jir. Wuxuu Zimbabwe maamulayay in ka badan 30 sano. Wuxuuna xilka qabtay ka dib xurriyaddii dalkaas.
Fikradda uu ka qabo mucaaradka waxa ay iska cadayd sannadihii 1980-aadkii xiligaas oo ciidammadiisii sida gaarka u tabobarnaa ay weerareen degmada Matebeleland halkaas oo lagu laayay kumanaan ka mid ah taageerayaasha Joshua Nkomo oo ahaa hoggaamiyihii mucaaradka.
Qof kasta oo dhaleeceyn u jeediyo gumeystaha waxaa loogu yeeri jiray “Qaa’inul waddan ama dabo dhilif”, kalmadahaas oo markii lagu guda jirey halganka hubeysan qofkii lagu dhoho ay ka dhigneyd xukun dil ah oo kale.
Prof Tony Hawkins oo ka tirsan jaamacadda Zimbabwe ayaa yiri “Markasta oo siyaasadda iyo dhaqaalaha is barbar qabtaan, siyaasadda ayaa guuleysan jirtay”.
Markii uu dhadhamiyay guuldaradii koowaad ee doorashada, sannnadkii 2000 xiligaas oo uu ku guuldaraystay aftidii dadka laga qaaday, waxa uu hawlgaliyay maleeshiyaadkiisii oo wata magaca “halyeeyada dagaalka” kuwaas oo gacan ka helaya ciidammada amniga, waxayna bilaabeen in ay laayaan mucaaraadka, qaar la jir dilo, qaarna la cabsi galiyo.